ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ IOS ကို 12 | Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » personalization Apps ကပ » Control Center ကို IOS ကို 12
ထိန်းချုပ်မှုစင်တာ IOS 12 3D ထိတွေ့မှုနှင့်အတူ
ကြော်ငြာများစွာမရှိပဲရနိုင်သည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤသည်အလွန်အေးမြ app ဖြစ်ပါတယ် !!! အကြီးမြတ်ဆုံး app ကိုအစဉ်အဆက် !!! အလေးအနက်ထား။
10000 + Wallpaers နှင့် Themes ရိုးရှင်းသော၊ Flat UI ဒီဇိုင်း၊ လန်းဆန်းစေသည်။
* Control Center 12 သည်သင်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးသည် ကင်မရာ၊ နာရီ၊ ဖန်သားပြင်နှင့်အခြားဆက်တင်များ
* လေယာဉ်ပျံအသုံးစနစ်၊ ဝိုင်ဖိုင်၊ Bluetooth၊ အနှောင့်အယှက်မပေးရ၊ ပုံတူ Orientation သော့ခတ်၊ တောက်ပမှုကိုညှိပါ၊
► Edge မျက်နှာပြင်
► Control Center 12D ထိတွေ့မှုရှိသည့် 3
လျင်မြန်စွာ Tools များ►
► Edge မျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ
► S ကိုအစီအစဉျ Edge
Note8 S8 များအတွက်►ဂီတ Edge
ဂီတကိုအစွန်းမျက်နှာပြင်တွင်ဖွင့်နိုင်သည်သီချင်းရွေးပါ၊ ခဏနားပါ။ Support: MP3, WAV, ASF, AAC ။
* ရိုးရှင်းသောနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် interface အယ်လ်ဘမ်, အနုပညာရှင်, အမျိုးအစား, အပုဒ်။
ထောင့်အနား Edge အလင်းရောင် !!!
LG G6၊ Samsung Galaxy S8၊ Samsung Galaxy Note8၊ Samsung Galaxy S9 တို့ဖြင့်လွယ်ကူစွာချိန်ညှိနိုင်သည်။
* အလင်းရောင်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောကာတွန်းထားပါ! သင်အဆက်အသွယ်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုသတ်မှတ်
* Edge Lighting သည်ရောင်စုံ။ လှပသောချောမွေ့။ လှပသောအသိပေးချက်ကိုပေးသည်။
Edge Ruler， ရွှေသံလိုက်အိမ်မြှောင် Co အလွန်အေးသော，， မီးအလင်းနှင့်မြန်ဆန်သောခလုတ်များ
Network မှ / Wifi / Bluetooth ကို GPS / / အသံချိန်ညှိမှုများနှင့်ပိုပြီး ...
5 ရက်များနှင့် real-time real-ခံစားအပူချိန်များတွင်ခန့်မှန်းချက်များ !!!
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ2သန်းပေါင်းများစွာသောနေရာများအတွက်မိုးလေ ၀ သဓာတ်ပုံများ၊ မိုးလေ ၀ သသတင်း၊
* နေထွက်ချိန်၊ နေဝင်ချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေ၊ မြင်နိုင်စွမ်း၊ လေတိုက်နှုန်း၊ သင်၏ခရီးသွားခြင်းအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
S Planner daily နေ့စဉ်သင်လုပ်သမျှအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုပါ။
Control Center ကိုတပ်ဆင်။ အသုံးပြုပါ။ 3D Touch Effect ဖြင့် Samsung Galaxy S8 အစွန်းနှင့် Samsung Galaxy Note 8 အစွန်းကိုအကြိုက်ဆုံးအဆက်အသွယ်အစွန်း၊ အကြိုက်ဆုံး app အစွန်း၊ လူများအစွန်း၊ Quick Tools, Edge မျက်နှာပြင်သတိပေးချက်များ၊ Weather Edge, S Planner Edge, Music Edge နှင့်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။ Samsung Galaxy Edge မှနောက်ဆုံးထုတ်ဟန်းဆက် ဤလျှောက်လွှာကိုပြုစုရန်သင့်ထံမှအကြံပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။ အသုံးပြုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Moto, Huawei, Oppo, Vivo, OnePlus, Xiaomi, Lenovo, LG, HTC, SONY ထုတ်ကုန်များသည် Edge မျက်နှာပြင်ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။ Note8 S8 အတွက် Edge မျက်နှာပြင်သည်မော်ဒယ်အများစုတွင်အလွန်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်သည်။ ဤသည်မှာအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အား5ကြယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုပေးပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီး AUTO-RUN ခွင့်ပြုချက်ပေးပါ
ကျေးဇူးပြုပြီး auto-run ခွင့်ပြုချက်ပေးပါ။ ထို့နောက် edge icon ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Edge မျက်နှာပြင်ကိုနေရာတိုင်းတိုင်းတိုင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ Pop-up window ခွင့်ပြုချက်ပေးပါ
အခြား permssion ကျော်ဆွဲပေးပါ
ထိန်းချုပ်မှုစင်တာ 3D ထိတွေ့မှု ^ ^
Screen Recorder + Screenshot + QR Code !!!
Galaxy S4 S10 နှင့် Or Android ဖုန်းများအတွက် Super 9k နောက်ခံပုံများ
tool ကို Edge
Apps ကပ Edge
အလွန်ကောင်းသော, ^ ^
သတင်းကောင်း, OPPO ဖုန်းကိုယခုသုံးနိုင်သည်
Control Center ကို IOS ကို 12
10.35 ကို MB
edge Lighting: ...
Next ကို S7 Edge ...
အမြဲတမ်း AMOLED အပေါ် ...
အမြဲတမ်း Edge တွင် - ...